Geli khariidada ee Excel - Isku-duwaha juqraafiga - Isku-duwaha UTM - Gofumed
Geli khariidada Excel - Isku-duwaha juqraafi - Isku-duulimaadyada UTM
Janaayo, 2018 Cartografia, Google Earth / Maps, aragti ugu horeysay
Map.XL waa codsi kuu ogolaanaya inaad geliso khariidada gudaha Excel oo si toos ah ugala xiriirta khariidada. Waxa kale oo aad soo bandhigi kartaan liis ay ku qoran yihiin cirbadaha iyo dusha muraayadaha.
Sida loo galiyo khariidada Excel
Marka Barnaamijka la rakibo, waxaa lagu daraa miis kale oo loo yaqaan "Map", oo leh qaababka Map.XL.
Ka hor inta aanad galin khariidadda waa inaad ku rakibtaa khariidada asalka, tani waxaa lagu sameeyaa "Khariidadda Khariidadda". Waxaa macquul ah in la isku habeeyo taariikhda iyadoo la adeegsanayo khariidadaha, sawirka ama isku-xidhka adeegyada:
Google Earth / Khariidadaha
Khariidada ayaa u muuqda midigta midigta, laakiin waa la jiidi karaa si ay u socoto, ama hoosta / sare ee miiska Excel.
Fiidiyowkani wuxuu soo koobayaa sida habka oo dhan loo sharraxay qodobkan, waxa ay ka shaqeeyeen qodobbada isticmaalka khariidadaha Bing sida aasaasiga ah.
Sida loo helo isku-duwayaasha laga bilaabo Excel
Tani waxaa lagu sameeyaa "Abbaar Calaamad". Nidaamku waa aasaas ahaan:
Riix batoonka Excel
Nadiifi, adiga oo isticmaalaya "Ctrl + V", ama badhanka saxda ah iyo xulashada Qashinka.
Sida loo sameeyo liiska Iskuduwaha
Template-ka lagu muujiyay fiidiyaha muuqaalka, waxaa dhistay Geofumadas, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad isku-duwo isku-duwayaasha sida ku cad aqoonsiga, markaa kadib waxay u hoggaansami doonaan miis iyo balaar.
MapXL waa bilaash, waxaadna ka soo dejisan kartaa boggan. Waxay sidoo kale soo iibsan kartaa miisaanka Miisaanka loo isticmaalo tusaalaha.
U dir koordayaasha khariidada.
Tani waxaa lagu sameeyaa 'icon markers', iyagoo soo xushay aagga miisaska xiisaha. Ka dibna foomka ayaa u muuqda inuu tilmaamayo meesha uu yahay meesha ugu balaarnaanta, taas oo ah Length, faahfaahinta isuduwaha iyo calaamadaha map-ka. Si aad iyaga uga qaaddo, waa inaad sameysid "Calaamadaha".
Soo gal halkan Map.XL, oo ​​ay ku jiraan template Excel.
Fiidiyowkani wuxuu tusinayaa habka lagu sharraxay qodobkan, iyadoo la adeegsanayo tusaale ahaan calaamadda dalxiiska ee fulka, iyadoo la adeegsanayo Khariidadaha Furan sida asalka.
Eeg iskuduwida UTM ee khariidada laga bilaabo Excel:
Tilmaamahaas kor ku xusan waxay muujinayaan isku-duwidda juquraafiyeed ee lagu muujiyo khariidada Excel. Haddii aad rabto waa inaad ku muujiso isku-duuduwiyadan khariidadda ee Universal Traverso Mercator (UTM), waa inaad isticmaashaa template sidan oo kale ah. Tusaalaha lagu muujiyay sawirka iyo fiidiyowga ayaa ah:
waxaad ka heli kartaa template halkan.
Post Previous«Previous Bentley Systems waxay ballaarisaa naqshadeynta iyo dukumiintiyada ay ku bixiyaan dhismayaasha la taaban karo iyada oo loo marayo helitaanka S-Cube Futuretech
Post Next Ku soo dhowow xilliga muddada dheerNext »
9 Jawaab in "Geli khariidada Excel - Isku-duwaha juqraafi - Isku-duwaha UTM"
Javier Arrocha isagu wuxuu leeyahay:
Ma jiraa hab lagu Raadiyo Magaca ama Cinwaanka ??
Haa, waa inay caadi noqotaa.
Juan José isagu wuxuu leeyahay:
Hello, si sax ah ma u shaqeysaa Excel Office 365? Ma arki karo khariidada khariidada ka dib markaad ku rakibto.
Waan ka xumahay Ma aanan dareemin.
Juan Pablo Meyer Cal isagu wuxuu leeyahay:
Hello, link to download map.xl weli wali la dhaqaajin.
IS IS-galka cas.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijka
Shoki isagu wuxuu leeyahay:
Hello salaan wanaagsan.
Waxaan soo dejiyey template laakiin ma jiro xiriir u gaar ah software nafta.
Fadlan waad caawin kartaa
Waxay u muuqataa marka loo eego lafaha kale ee ka duwan midka asalka ah (Isbanishka), isku xirka iyo foomka si aad u noqoto mid la arki karo.
Tag calaamadaha calaamadda calaamadda oo xulo afka isbaanishka.
Marka, waxaad arki doontaa foomka iyo links.
Maqaalkani wuxuu ku qoran yahay luqadaada
Shoki Cali isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u soo dejin karaa map.xl barnaamijka oo leh mawduuca 'excel template'